Puntland oo uga digtay Somaliland dhaq-dhaqaaqa ciidan oo ay ka wado gobolada Sanaag iyo Haylaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo uga digtay Somaliland dhaq-dhaqaaqa ciidan oo ay ka wado gobolada Sanaag iyo Haylaan
Puntland oo uga digtay Somaliland dhaq-dhaqaaqa ciidan oo ay ka wado gobolada Sanaag iyo Haylaan
July 16, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirka amniga dowlada Puntland, Cabdi Xirsi Cali “Qarjab”. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga dowlada Puntland Cabdi Xirsi Cali “Qarjab” ayaa ugu digay maamulka Somaliland dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay ka wadaan gobolada Sanaag iyo Haylaan.
Shir jaraaid oo wasiirka maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Gaalkacyo ayuu sheegay in aanay munaasib ahayn xilligaan in sabab loo noqdo dhiig Soomaaliyeed oo daata, isla markaana loo baahan yahay in ay Soomaaliland ka waantowdo fadqallalada ay ka wado dhulka nabadda ah ee Puntland, sidoo kale waxaa uu sheegay in aanay dawladda Puntland nabad ka qaadanayn daan-daansiga qaawan ee lagu hayo dalkeeda iyo dadkeeda.
“Maanta looma baahna in inta lasoo abaabulo dagaal dhexmara Puntland iyo Somaliland la daadiyo dhiig Soomaaliyeed, waana cambaaraynaynaa arrintaasi, balse waxaan idiin caddaynayaa in aanay dawladda Puntland nabad ka qaadanayn cid walba oo ku soo xad gudubta xuduudeheeda” ayuu yiri Wasiir Qarjab.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in aanay dawladda Puntland cidna duullaan ku ahayn, ayna diyaar u tahay in ay nabad iyo deris wanaag kula noolaato cid walba ay xuduud wadaagaan, waxaase uu biyo kama dhibcaan ku tilmaamay in aanay Puntland wax gor-gortan ah ka geleyn xuduudeheeda, wixii cawaaqib xumo ah ee halkaasi ka yimaadana ay dusha u ridan doonto maamulka Somaliland.
Puntland iyo Somaliland ayaa ku muransan gobolada Sool iyo Sanaag tan iyo markii la dhisay labada maamul kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya.
July 5, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo shacabka Puntland ugu hambalyeeyay Ciidul Fidriga
June 25, 2016 Madaxweynaha Puntland oo dib ugu soo noqday Garoowe
Banaanbax looga soo horjeedo afgembigii fashilmay ee Turkiga oo Muqdisho ka dhacay
Mareykanka oo liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab. Bayaan kasoo baxay Waaxda Arrimaha Dibada Mareykanka shalay oo Jimce ahayd ayaa lagu sheegay in Abuukar Cali Aadan la xayiray dhammaan [...]
Puntland President dissolves Galkayo local council
Galkayo-(Puntland Mirror) Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali has dissolved the local council of Galkayo district on Monday, according to the government spokesman. Speaking to the reporters in Galkayo, the presidential spokesman Abdullahi Mohamed Jama [...]
Mortar shells kill two people in Baidoa
Baidoa-(Puntland Mirror) At least two people were killed and 18 others were wounded in a mortar attack in Baidia south west of Somalia, an official said. “The mortar ammunitions killed two civilian and wounded [...]